Patong - lokhu ingenye ethandwa kakhulu resort izindawo ePhuket Island, Thailand fanele. Minyaka yonke izinkulungwane zabantu abahambi ngokuhlala lapha ukusuka emazweni ahlukahlukene, kuhlanganise eRussia nakwamanye amazwe ayengaphansi kweSoviet Union. Ngokuyisisekelo indawo ekhethwe intsha, ngoba kukhona njalo isimo kuyabudambisa owandile. Patong ngezinye izikhathi ngisho kubhekiselwa kuye ngokuthi "iyinhloko-dolobha ye amaqembu Asian", ngaphandle kukhona ezahlukene amahhotela ukuze ivumelane zonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Uma uhlela i iholide ukonga e Patong ke njengoba inketho yokuhlala zama cabanga ehhotela Seeka Boutique 3 *. Siphinde anikele ukuze ufunde kabanzi mayelana leli hhotela, kanye ukuthola ukuthi ikhona bathandile bakithi.
Leli hhotela isendaweni ezintabeni Patong, ukuqhela edolobheni. Ngakho, ibanga lomgwaqo Bangla Road, ezazidume ngokutshala nightlife yayo, zokudla, libhala kanye izikhungo wemboni yobulili, ikhilomitha elilodwa nesigamu. Mayelana elifanayo ehlukanisa ehhotela kanye ebhishi eliseduze. Ngenxa yokuthi ukuze nginqobe lezi amabanga ngezinyawo ungakwazi ngizithola ngemva kwezinsuku ezimbalwa nje efikile, abahambi ebona ukuncoma ukuqasha isithuthuthu noma usebenzise itekisi.
Esiseduzane Seeka Boutique 3 * International Airport itholakala Phuket. ibanga Its komyalelo wokungabi amakhilomitha 35. Ngakho ngemva flying Yenyukela ehhotela kuthatha cishe imizuzu engu-30-40. Uma uvakasha nge usizo inkampani yokulungisela abahambayo, esikhumulweni sezindiza ngokuqinisekile zidluliselwe. Uma waya Thailand bebodwa, ukusuka emoyeni port yokuhlala wakho angaba Limousines, amatekisi, amatekisi abavamile noma amabhasi. Inketho yokuqala eqolo, kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, ezikhanga kakhulu ezizwela yethu.
Phuket, Seeka Boutique Resort Indawo abantu abajwayele 3 *: isithombe kanye nencazelo
"Seeka Boutique" - ihhotela elincane ezintathu-star, elise Patong, ePhuket Island. Ngenxa yokuthi itholakala ukuqhela isikhungo, izivakashi ngeke aphazamise umsindo, futhi bangakwazi uphumule lapho kunokuthula nokuzola. Ihhotela yokuhlala 51 ukhululekile futhi ahlotshiswe i-Asian Igumbi isitayela. Lapha uzothola konke okudingayo ukuze ukuhlala kwakho. Ngaphezu kwalokho, ihhotela ekulesi ongaphandle indawo yokubhukuda, indawo yokudlela, ibha, ukuvakasha edeskini futhi massage okukhulu. Qiniseka ukuthi uma ufuna i ukonga kodwa ukhululekile yokuhlala inketho Patong (Phuket), Seeka Boutique 3 * - lena nje okudingayo.
Izinqubomgomo Ihhotela "Seeka Boutique"
Ngokusho imithetho ehhotela, ukufika izivakashi ngena emva 14:00. Endabeni i ukufika ngaphambili ozozama azixazulule (uma kukhona ukutholakala). Ngosuku kokuhamba wena kumele lishiye ezindlini zabo ngaphambi emini. Uma kudingeka, imali eyengeziwe, ungakwazi ukudlulisa isikhathi amahora ambalwa (isibonelo, endabeni lisuka ezindizeni kusihlwa). Khokha ehhotela kokubili yokuhlala futhi ukusetshenziswa izinkonzo ezihlukahlukene unga nganoma iyiphi indlela elula: ikhadi plastic noma ngokheshi.
I Seeka Boutique 3 *, abahambi Izibuyekezo iwubufakazi ukuthi, njalo Wamukelwa ngemfudumalo izivakashi nezingane bobudala obungefani. Ngaphezu kwalokho, uma efakwa ekamelweni wengane yakho ukuze iminyaka emibili olunikezwa enkundleni, noma ingane eneminyaka engaphansi kwengu-11 ubudala zokulala usebenzisa olukhona, bese ukhokhele akadingi. Kuvele Embhedeni owenezelwe unganikezwa enganeni esikhulile noma umuntu omdala. Le sevisi unikezwa phezu imali ngesisekelo.
Lokhu isigaba kunengqondo ukufunda lezo izihambi ngubani zijwayele ukuya phesheya e inkampani nezilwane ezifuyiwe abane-ezinemilenze. Ngakho, inqubomgomo Seeka Boutique Resort Indawo abantu abajwayele 3 * engabondli abakubo kungenzeka yokuhlala ehhotela izivakashi ezifuywayo.
Ihhotela Okubukwe inikeza amakamelo ukhululekile. Bonke bangabangasokile ngempela libanzi futhi ahlotshiswe ngendlela Asian, ne lokubhalela elikhanyayo. Ngaphezu izingcezu kudingekile ifenisha, igumbi ngalinye has yokugezela yayo elineshawa futhi hairdryer, air conditioning, ephephile, ithelevishini ne iziteshi satellite (kuhlanganise abakhuluma isiRashiya), ucingo, mini-bar kanye kuvulandi. Futhi, izivakashi zijabulela-Wi-Fi (iphasiwedi kumele itholakale edilini lomshado).
Ihhotela Seeka Boutique 3 * kanye nomsebenzi yokudlela. Lapha ungakwazi kuphakathi ibhulakufesi (kufakwe segumbi) kanye kwasemini noma dinner. Futhi, ungakwazi ukudla ngaphandle ehhotela, izindawo zokudla eziningi cuisine kazwelonke. Ngaphezu kwalokho, ihhotela has a bar nge Ukukhetha eziningi ezihlukahlukene kokubili iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza esithambile.
Ihhotela "Seeka Boutique" itholakala emgqeni wesibili. Beach eliseduze izivakashi zayo ungahamba imizuzu 15-20. Beach wendawo ifakwe konke okudingayo ukuze uphumule. Kukhona inala imigoqo kanye zokudlela lapho ungakwazi udle, uphuze wena baphathwe.
Endaweni encane Seeka Boutique has a 3 * ongaphandle indawo yokubhukuda nge ilanga ithala, ifakwe ukhululekile sun bed. Izivakashi nethuba ukuvakashela massage emakhazeni asendaweni. Ngaphezu kwalokho, ukwamukela ehhotela usebenza ubusuku nemini. Lapha ungafaka isicelo nganoma isiphi isikhathi futhi kunoma iyiphi mbuzo. Izihambeli zingasebenzisa Ilondolo kanye nezakhiwo ezomile yokuhlanza amasevisi, ukubhuka uhambo ezikhangayo ayathanda, noma ukuqasha imoto noma ngesithuthuthu.
Amanani indawo yokuhlala ehhotela ezintathu-star e Phuket "Seeka Boutique" ziyavumelana esigabeni sayo, izinga lenkonzo nenduduzo. Ngakho, indawo yokuhlala wezinsuku eziyisikhombisa amabili lapha izobiza ngawe inani ruble ayizigidi 11 ekamelweni ejwayelekile, kusukela ama-ruble ayizigidi 18 ekamelweni esiphakeme futhi ama-ruble ayizigidi 22 ikamelo Deluxe. Lokhu izindleko yokuhlala kuhlanganisa ibhulakufesi.
Seeka Boutique Resort Indawo abantu abajwayele 3 *: Izibuyekezo lezihambi ezivela eRussia
Ukuze umqondo kwakho ehhotela ezintathu-star "Seeka Boutique" yayiphelele nethembekile, siphakamisa yazi ne wezakhamuzi esikanye nalo, okuyinto ezikhathini zamuva ziye sathola ithuba uvakashele lapha. Lapho ubheka ikusasa, siphawula ukuthi iningi izivakashi bathandile ehhotela. Ngokombono wabo, kuwufanele imali futhi iyindawo enhle yokuphumula. Kodwa ukunikeza ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nakho konke.
Ngokuqondene amakamelo, zingabantu icwecwe futhi abahambi wathola ngempela ethokomele. Nefenisha nezinto zikagesi ayimisha, kodwa isimo esihle sokusebenza. Sicela uqaphele ukuthi minibar e imali endlini. By the way, izivakashi belulekwa ukuba ayeke lapha abafuna ukuphuza egumbini lami uthenge ngaphandle imimoya ehhotela ukukuthwala esikhwameni esivalwe noma sikhwama. Lokhu kungenxa yokuthi ukuphathwa ehhotela evumela ukusetshenziswa ku insimu yalo utshwala wathenga lapha kuphela. Mthetho bangase ngisho bajeziswe ngumuntu esihle 300 baht. Kukhona omunye umthetho ngaphezulu ukuthi kuyinto efiselekayo ukuhambisana nayo yonke izivakashi Seeka Boutique 3 *. Kumayelana ukuvinjelwa beletha amakamelo ukudla. Ngenxa yalesi ngeke jezisa, kodwa uma ushiya etafuleni egumbini izithelo ezinoshukela, bese kuba ngu-kwamahora ambalwa ukuze sibuye size kini akuyona izivakashi mnandi kakhulu ngesimo ezibomvu. Ngakho-ke, ngisho noma unquma udle uphayinaphu noma ikiwi izithelo egumbini lakho, musa ubuvila bese uya phansi ihholo futhi aphonse izinsalela izithelo kudoti. Njengoba for yokuhlanza amakamelo, ke kwenziwa nsukuzonke futhi izinga eyanele. Amathawula nazo ulwazi olusha nsuku zonke. nezincekukazi amashidi nako washintsha kabili ngesonto.
Ukubuyekeza ku indawo ehhotela kusuka bakithi empeleni ababesadla ezifanayo. Ngakho, iningi izivakashi uyaqaphela ukuthi wenza isinqumo khona leli hhotela ngenxa yokuthi ukuthi itholakala kude enkabeni yedolobha, ngakho izivakashi zayo bayakwazi uphumule lapho kunokuthula nokuzola. Phawula futhi ukuthi endleleni eya ebhishi eliseduze ngeke kufanele ushiye imizuzu engaba ngu-20. Ukuze ukwazi ukulondoloza isikhathi nomzamo unyawo uhamba, abahambi ebona kakhulu ukuncoma izimenywa Phuket Seeka Boutique 3 * ukuqasha isithuthuthu lonke iholide. Lokhu kuzokuvumela ukuba uvakashele amabhishi zendawo ezahlukene, kanye kancane ukuhamba ubumnandi azungeze lesi siqhingi. Qasha isithuthuthu nezinye izimoto kungenziwa iphuma ku izigaba eseduze. Kodwa uqaphele, ngoba traffic lapha emnandi kakhulu.
Kepha ukudla ehhotela ke, ngokuvumelana izivakashi, "Seeka Boutique" izivakashi ibhulakufesi kuphela. Ukudla lapha ilula kodwa esihlwabusayo futhi zihlukahlukene. Ngeke elambile. Ukudla kwasemini kanye dinner kwelinye zokudla abaningi endaweni yase-ihhotela. Izidlo simnandi futhi ayibizi kakhulu.
Kahle aphendule futhi abahambi ingqalasizinda ehhotela. Ngakho, abaningi bathandile lendawo yokubhukuda. Ngenxa yokuthi itholakala ephakathi ezimbili izakhiwo ehhotela, imisebe ilanga elishisa bhé lapha cishe akuzange kwehle. Leli qiniso baziswa izivakashi kwalinganiselwa ukuthi ezinsukwini zakuqala ikhishwe, "ashisiwe" ogwini futhi kwadingeka ukuba ukuphila kusayithi. Futhi, eziningi abantu bakithi kakhulu adunyiswe massage at Seeka Boutique Resort Indawo abantu abajwayele 3 *. Ngokusho kwabo, kukhona iqembu ochwepheshe kweqiniso. Ngaphezu kwalokho, izivakashi bayaqinisekiswa ukuthi arcade / intengo ratio ku massage eduze ihhotela ngeke ukuthole.
Ekuphetheni, siphawula ukuthi, ngokuvumelana abahambi Russian "Seeka Boutique" yindawo kahle ehloniphekile ukuze uhlale ngesikhathi evakashele esiqhingini Phuket (Thailand). izivakashi eziningi ima lapha zalujabulela esizikhethayo kanti bancoma leli hhotela ukuba nabangane nabantu obajwayele.
Amahhotela eshibhile e Sergiyev Posad
Ihhotela Nirvana Lagoon Villas Suites SPA 5 * (Beldibi, Turkey): incazelo kanye nokubuyekeza
Amaqiniso ethakazelisayo uNcibijane: indlela ezigubha leli holidi emazweni ahlukahlukene
Umuthi best isibindi. Tablets ngoba isibindi: Uhlolojikelele
Indlela yokulawula amaphupho futhi ushintshe iskripthi zabo